Misokatra Indray Ny Toerana Masina Ao Jerosalema Taorian’ny Fikendrena Hamono Jiosy Mpikatroka Mafàna Fo, Henjankenjana Ny Raharaha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Novambra 2014 3:42 GMT
Ireo tafontrano ao amin'ny faritra Jerosalema Jiosy (Andrefana) ahitàna ny Tempoly eny Antampon-Tendrombohitra “Temple Mount” (Atsinanan'i Jerosalema) ery aoriana ery. Sary avy amin'i Jelle Drok mpampiasa Flickr. (CC)
Ilay famonoana nikendrena an'ilay Jiosy mafàna fo avy amin'ny elatra havanana sady mpitari-pivavahana, Raby Yehuda Glick, no voatondro ho “fiharatsiana saropady indrindra” eo amin'ny fifandraisan'ny Israeliana sy ny Palestiniana, nametraka ahiahy maro any amin'ny faritra momba ny hoe andàlan'ny hitsimbadika ho any amin'ny intifada (fitroarana) fahatelo ilay faritra .
Ny alin'ny Alarobia (29 Okt) lasa teo, voatifitra ary naratra mafy tokoa i Glick. Fantatra amin'ny maha “mpikatroka mafàna fo fanta-bahoaka avy amin'ny elatra havanana” azy, nanisika hevitra hatrany i Glick ny mba hitomboan'ny fahafahan'ireo Jiosy miditra any amin'ny Tempoly eny antampon-tendrombohitra. Voasokajy ho toerana masina indrindra ho an'ny finoana Jodaisma, ilay Tempoly eny antampon-tendrombohitra no manamarika ny toerana voalohany nisy ny Tempoly Masina, noravàn'ny Romàna tamin'ny taona 70, fihetsika iray nandefa ireo vahoaka Jiosy ho sesitany nandritry ny efa ho 2000 taona. Io ihany koa no toerana voalaza fa namatoran'i Abrahama, rain'ny mpino, an'i Isaka zanany lahy saika hatao sorona ho an'Andriamanitra.
Ny Tempoly eny antampon-tendrombohitra no toerana fahatelo masina indrindra maneran-tany ho an'ireo Silamo ary tafiditra ao anatin'izany ilay toa sahafa be mihohoka vita vato (Dome of the Rock) sy ny Maoske Al-Aqsa, toerana inoan-dry zareo ho niakaran'ilay mpaminany Muhammad avy any LaMeka.
Iray andro taorian'ny tifitra nanjo an'i Glick, nakatona tsy ho azon'ireo Silamo mpivavaka hidirana ny Tempoly teny antampon-tendrombohitra, naverina nosokafana ny 31 Oktobra rehefa avy nohamafisina ny fiarovana nialoha ny fivavahana isaky ny Zoma.
An-taona maro no efa navaivay ny fiadiana ity toerana masina ity. Nantsoina hoe “Intifada-n'i Al-Aqsa” ny Intifada faharoa (fitroarana faharoa nataon'ny Palestiniana nanoherany ny Israeliana tamin'ny 2000 hatramin'ny 2005) noho izy io natosiky ny fitsidihana ny Tempoly teny antampon-tendrombohitra nataon'ny praiminisitra Israeliana, Ariel Sharon, fihetsika noraisin'ireo Palestiniana ho toy ny fandranitana, niafara tamin'ny fanombohan'ilay herisetra mahery vaika naharitra dimy taona teo amin'ny Israely sy Palestina.
Mpitarika ny fikambanan'ireo Mpino tsy mivadika amin'ny Tempoly ao antampon-tendrombohitra i Glick , izay ny tanjona apetrany dia ahitàna ny hoe:
Fanafahana ny Tempoly eny antampon-tendrombohitra amin'ny fibodoan'ny Arabo (miozolmana). Ny “Dome of the Rock” sy ny maoske-n'i Al Aqsa dia napetraka ao amin'io faritra Jiosy na toerana masina ara-baiboly io ho toy ny mari-pamantarana manokana ny fandresena sy ny fibodoanan'ny miozolmana. Tsy afaka atolotra ho amin'ny anaran'Andriamanitra mihitsy ny Tempoly eo antampon-tendrombohitra raha tsy efa afaka ireny toeram-piankohofan'ny jentilisa ireny. Efa nisy ny fanolorana soso-kevitra hanesorana azy ireny, hamindràna toerana sy hamerenana manorina azy any LaMeka.
Ito ny ampahany amin'ny kabary iray nataon'i Glick , minitra vitsy talohan'ny nahavoatifitra azy:
This is the speech Yehuda Glick gave just moments before he was shot. Watch it and be inspired: http://t.co/f8TabVIXfU #TempleMount
Ity no kabary nataon'i Yehuda Glick taloha kelin'ny nitifiran'ny sasany azy. Jereo ary makà aingam-panahy avy amin'izany: http://t.co/f8TabVIXfU #TempleMount
Nitondra valinkafatra ireo median'olon-tsotra momba ilay fikasàna hamono. David Ha'ivri (“David ilay Hebreo”) nangataka ireo mpanjohy azy mba hivavaka ho an'ny fahasitranan'i Glick:
Manandrata vavaka ho an'i Yehuda Yehoshua ben Brenda. Nisy nitifitra i Raby Yehuda Glick, ilay mpitarika ny fiarovana ny zon'ny Jiosy ao amin'ny Tempoly antampon-tendrombohitra.
Tale sady mpikambana mpanorina ny ONG antsoina hoe Jerosalema ety an-tany (ירושלים דלמטה) i Daniel Seidemann izay nilaza ny aminy toy izao:
“… fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana israeliana izay miasa mba hamantatra sy hanaraka ny fivoaran'ireo toeram-ponenana ao Israely mety hisy fiantraikany amin'ny zotra ara-politka na ny safidy hànana sata maharitra, hanozongozona ny tanàna na hanely herisetra, na hamorona olana amin'ny maha-olombelona.”
Seidemann nahamarika fa:
Ny fikasana hamono ilay mpikatroka mafàna fo avy ao amin'ny Tempoly antampon-tendrombohitra, Raby Yehuda Glick, dia fiharatsiana faran'izay mitera-doza. Tena sahala amin'ny ratsy be an.
Hihozongozona mafy tokoa i Jerosalema ato anatin'ireo ora/andro maro manaraka. Tokony hiantso fitoniana ireo sakaizan'i Israely sy Palestina
Nanamarika i Barak Ravid, Israeliana mpanao gazety sady mpandefa bitsika miely patrana tokoa :
Efa eto ny intifada fahatelo – raha misy olona mbola tsy mahatakatra izany
Raha ao anatin'ny fahana Twitter-ny kosa, marobe ireo mpaneho hevitra no nanakiana fatratra azy, niteny ny “hitoniany” “tsy ho maika hanao tsoa-kevitra,” ary “hijanona ho mpanao gazety, fa tsy mpikitika vodin-tsoavaly.”
Yara, palestiniana iray manomana diplaoma ambony, namaly hoe:
@jncatron @BarakRavid I think it's an outdated way to frame the situation. Since 2nd intifada, it's been terrible. Did it ever really end?
@jncatron @BarakRavid Heveriko fa efa lany andro izany fomba faneho ny toe-draharaha izany. Satria efa zava-doza ny intifada faharoa. Dia mbola tsy tapitra tanteraka ve ?
Lisa van Wyk nanontany hoe:
“Ahoana no hamaritanao ny fitroarana iray ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fikatrohana ary fanoherana voarindra avy ety anaty aterineto? An-dàlana io.”
Jonathan Schanzer, monina any Etazonia, manampahaizana momba ny asa fampihorohoroana dia efa imbetsaka nanoratra mikasika ny olana, na ho fambaran'ny hisian'ny intifada aminì'ny hoavy na tsia ireo herisetra tato anatin'ny herinandro vitsivitsy:
Tsy mbola nisy toa azy ny haavon'ny rivotra mafampàna mampiavaka ny eto Jerosalema amin'izao, raha ny hevitro.Tanàna mihenjana mandrakariva, saingy mizotra ho amin-javatra hafa isika
….the shooting tonight. All point to a very centralized storm. But could easily be a flashpoint for a broader one, given Jlem's importance
…ny tifitra androany alina. Manondro teboka iray ho fiaingàn-tafiotra avokoa ny zavatra rehetra. Saingy mety ho kely hiteraka iray goavana, indrindra fa fantatra ny lanjan'i Jerosalema.
Mairav Zonszein, mpanoratra sady mpikatroka mafàna fo, nanamarika hoe :
Efa nandre sahady tatitra momba ireo Palestiniana noratrain'ireo voanjo any amin'ny Cisjordanie. Dia hitohy ho ratsy fotsiny izao ity
Ampahatsiahivina antsika ihany koa fa :
Tao anatin'ny 13 taona, ity no voalohany nisian'ny asa fampiorohoroana nataon'ny Palestiniana tao #Jerusalema, nikendreny manokana olona iray
Ho fanampin'ìzay, Glick, toy ireo roa hafa maty tamin'ny herinandro lasa, dia mizaka zom-pirenena Amerikana. Maty taminà fanafihana mampihorohoro nampiasàna fiara nafatratra tamin'ireo olona nilahatra fiaran-dalamby ny zazakely iray, Haya Zissel Braun, nipitika niala lavitry ny kalesy kely fanosehana azy. Orwa Abd El-Wahab Hammad, izay nonina tany Etazonia hatramin'ny faha- 6 taonany, dia voatifitra sy matin'ny miaramila Israeliana “taorian'ny saika hitorahany baomban-tsolika Molotov [tamin'ny] mpifamoivoy.”
Maty tao Jerosalema i Haya Zissel Braun telo volana, Maty tao Silwad i Orwa Abd El-Wahab Hammad, Yehuda Glick: teratany #Amerikana daholo
Dr. Belal Dabour, mpitsabo avy ao Gaza, mampahatsiahy antsika ny momba ny fanafihana naharitra 7-herinandro tao Gaza izay nifarana tamin'ny 26 Aogositra. Azy ny teny farany momba ny fihenjanana ao antampon-tendrombohitra:
Tsy haiko na ireo manodidina ahy ihany, fa efa nionona tsy nanohy nanao asa fanorenana sahady ny olona sasany ary efa nanomboka nanao fanisa miverina mankany amin'ny ady manaraka.